Love on Delivery 1994 – Myanmar Subtitles
Genre: Comedy Director: Lik-Chi Lee Actors: Christy Chung, Man-Tat Ng, Philip Chan, Stephen Chow Country: Hong Kong Released: 03 Feb 1994 Score: 6.9 Duration: 100 min Quality: 480p, Bluray 1080p, Bluray 720p Years: 1994 View: 2,607
ဒီအပတျတငျဆကျပေးမယျ စတီဗငျခြောငျ ကားအသဈလေးကတော့
3/2/1994 ကထှကျရှိထားတဲ့ Love on Delivery ဇာတျကားလေးပါ ဒီဇာတျကားလေးက action romantic comedy အမြိုးအစား ဖွဈပွီး စတီဗငျခြောငျဇာတျကားကောငျးတှကေို ရိုကျကူးပေးနတေဲ့ ဒါရိုကျတာ Lee lik-Chi နဲ့ Stephen chow တို့ကရိုကျကူးထားတာပါ
Lee lik chi ကို ဒီဇာတျကားတှငျ သတငျးထောကျအယျဒီတာခြုပျအနနေဲ့ပါမွငျတှရေမှာပါ
ထုံးစံအတိုငျးနာမညျကွီး Stephen Chow Movie Collection Myanmar နဲ့ ပူးပေါငျးတငျဆကျလိုကျပါတယျ
အားနညျးခြိုတဲ့ပွီး ကပျြမပွညျ့တဲ့ မုနျ့ပို့သမားလေး စတီဗငျခြောငျ
ဂြူဒိုသငျတနျးက သငျတနျးသူ လိုငျ ကို
သငျတနျးဆရာ ဝကျဝံကွီးနဲ့ အပွိုငျပိုးရငျး
ပြော့ညံတယျ ယောကျကြားမြိုးကို မကွိုကျနိုငျကွောငျးပွောလိုကျတဲ့ လိုငျ ကွောငျ့ စတီဗငျခြောငျ အသညျးကှဲနတေဲ့ အခြိနျ
သူရဲဘောကွောငျမှုကိုပိုကျဆံဖွငျ့လဲလှယျပွီး Kung fu သငျပေးမဲ့
စတိုးဆိုငျပိုငျဆိုငျ (ယခငျ တရုတျရိုးရာလကျဝှပေညာရှငျ)
ng man tat ရောကျလာတဲ့ အခါ ????
ဂြုဒိုဆရာနဲ့ မုနျပို့သမားလေးကွား ကာရာတေးဆရာ က ထပျဝငျလာတဲ့ အခါ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈမလဲ ဆိုတာကတော့ ပရိသတျကွီးဘဲ ကွညျရူလိုကျကွပါ
Box office: US $36,906,730.00
Reviews Nay Maint Yaun (Sc Channel)
Translated by Nay Maint Yaun (Sc Channel)
Encoder : Lin Htike Aung
Quality : 1080p Bluray (1.84GB), 720p Bluray (1.17GB), 480p (681MB)
Subtitle myanmar Subtitle (Hard sub)
Link type: GoogleDrive, Mediafire
Download လငျ့ကိုအောကျ Comment တှငျရယူရနျ
ဒီအပတ်တင်ဆက်ပေးမယ် စတီဗင်ချောင် ကားအသစ်လေးကတော့
3/2/1994 ကထွက်ရှိထားတဲ့ Love on Delivery ဇာတ်ကားလေးပါ ဒီဇာတ်ကားလေးက action romantic comedy အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး စတီဗင်ချောင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ Lee lik-Chi နဲ့ Stephen chow တို့ကရိုက်ကူးထားတာပါ
Lee lik chi ကို ဒီဇာတ်ကားတွင် သတင်းထောက်အယ်ဒီတာချုပ်အနေနဲ့ပါ​မြင်တွေရမှာပါ
ထုံးစံအတိုင်းနာမည်ကြီး Stephen Chow Movie Collection Myanmar နဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်
အားနည်းချိုတဲ့ပြီး ကျပ်မပြည့်တဲ့ မုန့်ပို့သမားလေး စတီဗင်ချောင်
ဂျူဒိုသင်တန်းက သင်တန်းသူ လိုင် ကို
သင်တန်းဆရာ ဝက်ဝံကြီးနဲ့ အပြိုင်ပိုးရင်း
ပျော့ညံတယ် ယောက်ကျားမျိုးကို မကြိုက်နိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့ လိုင် ကြောင့် စတီဗင်ချောင် အသည်းကွဲနေတဲ့ အချိန်
သူရဲဘောကြောင်မှုကိုပိုက်ဆံဖြင့်လဲလှယ်ပြီး Kung fu သင်ပေးမဲ့
စတိုးဆိုင်ပိုင်ဆိုင် (ယခင် တရုတ်ရိုးရာလက်ဝှေပညာရှင်)
ng man tat ရောက်လာတဲ့ အခါ ????
ဂျုဒိုဆရာနဲ့ မုန်ပို့သမားလေးကြား ကာရာတေးဆရာ က ထပ်ဝင်လာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီးဘဲ ကြည်ရူလိုက်ကြပါ
Download လင့်ကိုအောက် Comment တွင်ရယူရန်
GoogleDrive Myanmar 1080pBluRay
(1.84GB) Download Mediafire Myanmar 1080pBluray
(1.84GB) Download GoogleDrive Myanmar 720pBluRay
(1.17GB) Download Mediafire Myanmar 720pBluray
(1.17GB) Download GoogleDrive Myanmar 480p
(681MB) Download Mediafire Myanmar 480p
#Love on Delivery 1994 #Download Love on Delivery 1994 Full Movie #Free Love on Delivery 1994 Download